Yeka Ukubhala kwii-Injini zokuKhangela | Martech Zone
NgoLwesithathu, Matshi 21, 2007 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Itemplate yam yeWordPress ilungiselelwe iiNjini zokuKhangela. Ndicwangcise ngononophelo itemplate yam ndifunde iingcebiso ezimbalwa kubantu abambalwa. Yonke into esuka kwizihloko zamaphepha ukuya kwiithegi ziye zalungiswa ukuze zicofwe kangangoko ndinako.
Ukulungiselela ukusebenza kwetemplate yam yebhlog- phantse iipesenti ezingama-50 zeendwendwe zam ziza ngendlela yeeNjini zokuKhangela, ikakhulu uGoogle. Nangona ibhlog yam ilungiselelwe iiNjini zokuKhangela, seo iingcali ziya kuqaphela ukuba iiposti zam azinjalo.
Andiphindi umxholo wam wokuqala kwizivakalisi zam ezimbalwa zokuqala. Andisebenzisi itoni yeekhonkco kwizithuba zam. Andihlali ndidibanisa nezam izithuba ngaphandle kokuba zihlobene ngokwenene. Emva kokufunda itoni ye seo amanqaku, ndingabhala uluhlu lwezinto endiza kuthi kufanele yenza ngeposi nganye.
Andizukuyenza kuba andibhalelanga ii-Injini zokuKhangela, ndibhalela abafundi. Kubonakala ngathi kukunganyaniseki ukutshintsha isitayile sencoko yam ukuze isoftware ethile isebenze kwi-web crawler inokutsala ulwazi lwam kwaye ikhombe amanqaku am kukhangelo lwamagama aphambili. Andikhathali nokuba injini yokukhangela inokundifumana lula… ndiyakhathala ukuba umfundi wonwabele iiposti zam.
Oko bendiwafunda la manqaku okwexeshana, ndiyabona xa ezinye iibhlog zisenza. Lilizwi nje lesilumkiso kwabo bhlogi-mna tsiba ukufunda uninzi lwezithuba zakho ngenxa yayo. Ngamaxesha athile, ndiyeke nokurhuma.
Enye indlela yokuxelela ezi blogger ngabagqabazi bazo… uhlala ubona amagqabantshintshi ahlukeneyo veki nganye usiya kwibhlog yazo. Akukho ncoko… uluvo nje apha naphaya kwaye abafundi abaze babuye. Ndiyonwabile ngokwenene ukubona abantu abafanayo bebuyela kwiblogi yam ngokuphindaphindiweyo. Ndikhule ndizihlobo nabahambi bam abaninzi- nangona ndingazange ndadibana nabo.
Abo banemvelaphi yokuthengisa ngokuthe ngqo bayazi ukuba uphando nakweyiphi na indlela ekuxelela ngayo ukuba kunzima ngakumbi ukufumana abafundi abatsha kunokugcina esele ikho. Sisicwangciso-qhinga sokuzibetha xa ubhala ukwakha ukubekwa kweinjini yokukhangela kodwa abafundi bakho abayonwabeli okanye abayinamatheli ibhlog yakho. Kuya kufuneka ugcine ulungiselela kwaye ugcine ukubamba ukuze ufumane ukubetha okungaphezulu kwiiNjini zokuKhangela.
Sukubhalela iiNjini zokuKhangela. Bhala abafundi bakho.
Mar 22, 2007 ngo-1: 02 AM
enkosi ngokuhlolwa kwengqondo 🙂
ngamanye amaxesha ekuzameni kwethu ukufakwa kubonakala ngathi siyalibala ukuba kukho abafundi ngokwenene phaya.
Mar 24, 2007 ngo 9:08 PM
Andisoloko ndinxibelelanisa nezam izithuba ngaphandle kokuba oko kuyazalana ngokwenene.
Ndiphantse ndingaze ndidibanise nezam izithuba. Kungenxa yokuba ixesha elininzi, izithuba zam azibonakali zilandelana. Ngokuqhelekileyo bakwisihloko nje somzuzu, bengenalo naluphi na uxhumano (okanye oluncinci, ukuba lukhona) kwizithuba zangaphambili.
Epreli 2, 2007 ngo-3: 25 PM
Ndaqala iblogi kwaye ndacinga ukuba ndiza kuyenza kanye loo nto, ndibhalele ukufumana iirenki zamaphepha kunye nokunye, emva koko xa ndiqala ukubhala, kwavakala ngathi ayindim…Kuba yayingeyiyo! Ndaye ndathi ukuba ndiza kuyenza it was gonna be on my terms and no others. Bendibhloga inyanga kuphela kwaye ndiyayithanda into yokuba ndakha ubudlelwane hayi amakhonkco!
Epreli 2, 2007 ngo-4: 37 PM
Enkosi, Latimer! Bendisandula ngaphaya kwibhlog yakho (ndicinga ukuba sinomhlobo ofanayo – JD osuka Mnyama kwiShishini. Ibhlog yakho ibhalwe ngokucingisisayo… uchukumisa inani lezihloko eziqhumayo, kodwa ngembeko unikezela ngecala lakho lempikiswano kwaye ushiye isihloko sivulekele ingxoxo.
Ndifunde amanqaku amaninzi kwi-blogosphere malunga nento onayo kufanele yenza… kwaye ngokuqinisekileyo ndicinga ukuba uninzi lwayo yiBS Ifana kakhulu nokuxelela umntu indlela abenza ngayo kufanele ncokola nomntu ongamaziyo.
Enkosi ngokumisa kunye nokuphawula!
Epreli 2, 2007 ngo-5: 11 PM
Enkosi ngokumisa uDoug, njengoko ndisitsho kwibhlog yam ndihlala ndivulelekile ukuva zonke izimvo kwaye sinokuba neengxoxo ezikrelekrele ngawo nawuphi na umba. Kwakhona ndiyabulela ngokuhlomla.
Epreli 3, 2007 ngo-3: 29 PM
Bendifuna nje ukunazisa ukuba ndiyonwabele kakhulu into oyithethileyo kule post. Ndisandula ukuqala ibhlog yam kwisithuba esingaphezulu kwenyanga edlulileyo kwaye ndiyazinza ndifunda indlela yokwenza le nto, ke ingcebiso yakho inceda kakhulu kuba iyinyani. Nangona ndingekabikho ngalo mzuzu, kuye kwafuneka ndilwe nesihendo sokwenza nantoni na ukunyusa ukubala. Kufana nokuba likhoboka lecrack okanye into, uyazi? ABAFUNDI ABANINGI, kufuneka ndibe ABAFUNDI ABANINGI.
Kodwa ngoku ndifundile iposi yakho kwaye yonke into ibuyela kum, njengela lizwi lincinci livalelwe ngasemva kwengqondo yam. Lowo wohlwaywa ngokwenza ingqiqo. Thetha into oyaziyo, yithethe njengoko utshoyo, kwaye baya kuza.
Ngokuxolisa, ewe, ukuya "kuMmandla wamaphupha".
Epreli 3, 2007 ngo-5: 08 PM
Enkosi, Keith. Ndicinga ukuba wonke umntu (nangaphandle kokubhloga) ufuna ukuqatshelwa. Kwakhona ndizifumana ndibhala ngamanye amaxesha ndizibuza ukuba kuya kuchaphazela njani i-SEO yam, amakhonkco, i-diggs, njl. ngokwam emgceni ngokunjalo!
Epreli 3, 2007 ngo-5: 53 PM
Isithuba esihle. Ndizama ukungabhali kwiinjini zokukhangela, kodwa kufuneka ndivume ukuba ndicinga ngayo. Kwezinye izihloko zezithuba zam (ukuba zihambelana nesiganeko esikhulu), igama elithi ngoko linokuthi licholwe ngeenjini zokukhangela. Andikwenzi oku ukuze ndibe nenani eliphezulu labatyeleli kwindawo (ndinezinye iindlela zokondla i-ego yam). Ndiyenza kuba ndifuna abantu bayifunde into endiyithethayo. Ngethemba baya kubuya bathathe inxaxheba kwingxoxo. Ukubloga kumnandi. Ndifumana ukudibana nabantu abakhulu kwaye ndifunde okuninzi kwinkqubo.
Epreli 3, 2007 ngo-9: 40 PM
Kholwa okanye hayi, ungabhalela iinjini zokukhangela KUNYE nabafundi bakho.
Ndiyathanda ukucinga zombini/kwaye endaweni nokuba/okanye.
Epreli 3, 2007 ngo-9: 59 PM
Naliphi na ithuba lokuba ndingakucela umngeni ukuba wenze umboniso onjalo? Andithandabuzi ukuba akunakwenzeka - ndicinga ukuba kukho iindlela zokwenza zombini. Nangona kunjalo, andikwazi ukuchonga nayiphi na imizekelo. (Mhlawumbi kungenxa yokuba umbhali wenze umsebenzi olungileyo wokusebenzisa iindlela zombini.)
Ndingathanda ukubona isithuba esingahleliwe esibhaliweyo kakuhle kwaye siqhathanise nesithuba esibhaliweyo kakuhle KWAYE sisebenzisa ubuchule beeNjini zoPhando.
Epreli 4, 2007 ngo-7: 49 AM
Emngciphekweni wokuvakala ndizincoma ngokupheleleyo, nasi isiqwenga endisidalileyo esifumana ukugcwala kwe-injini yokukhangela kunye neyona nto ibonwa ngabafundi bam abaqhelekileyo:
Imithetho yeBracelet yokuKhalaza: Ngaba unamathela kuyo?
Ndinazo nje ezimbalwa ezinje: kuThixo yedwa malubekho uzuko.
Nangona ndivuma ukuba ndiyayazi into oyithethayo- ngamanye amaxesha ndiye ndithande i-SEO kunabafundi bam abaqhelekileyo, kodwa ndiyavuya ukuba abafundi bam abaqhelekileyo basabuya kuba bayandithanda.
Ingathi ndikunye Ilker Yoldas 'TheThinkingBlog.com: Ndihlala ndiyifunda kuba ndiyamthanda, ngoko ke wayekwazi ukubhala i-SEO kwaye ndizobe ndilapho njengomfundi wakhe wesiqhelo!
Zinakekele kwaye ndiyabulela ngokuphendula,
Epreli 4, 2007 ngo-10: 10 AM
Enkosi, Paula. Ngethemba, uthathe ngendlela eyiyo le - kodwa ndicinga ukuba uncedile ekuxhaseni isiseko sam. Ukukhankanya kwakho “isacholo esingakhalaziyo” amatyeli aliqela kwiziqendwana ezimbalwa zokuqala akuvakala kuyinyani- kufundeka ngathi i-SEO ibiyeyona iphambili kunokuba ubuthetha nam.
Isithuba sihle, ndicela ungandithathi ngendlela engalunganga. Kodwa kwiminyaka eyi-5 xa ii-injini zokukhangela zinokusasaza idatha ye-topical ngaphandle kwesidingo sokuzibhalela - ngaba le nto ingaba yindlela yendalo yokubhala isithuba?
Okumangalisayo kukuba, ndaya esi sithuba kwiBlog yokuCinga kunye nomhlathi wokuqala 21 amakhonkco asimahla kuyo ukuze adibanise nzulu kwibhlog yakhe. Ezo linki zezeinjini zokukhangela kuphela, hayi ezam nawe.
Ngayo yonke intlonipho!
Epreli 4, 2007 ngo-10: 14 AM
Akukho tyala lithatyathiweyo; enkosi ngokufunda iposi yam.
Kwaye ewe, ngokuqinisekileyo andiyi phinda kwaye ukhaliphe amabinzana abalulekileyo e-SEO ukuba bendingafuni abantu bazifumane.
Yeha, bunjalo ubomi be-SEO'er…
Ndiyazibuza ukuba wonke umdlalo we-SEO-Google uza kutshintsha njani kwixesha elizayo.
Kufanele ukuba ibe luhambo olunika umdla...
Epreli 4, 2007 ngo-10: 23 AM
Yhuu! Kabini-whwu! Enkosi Paula.
NgoJanuwari 23, 2008 ngo-4:20 PM
Funda nje le posi kunye nexesha elifanelekileyo. Ndishiye intlanganiso kwiveki ephelileyo apho umntu endisebenza naye waphendula kwingcinga yokuba iiwebhusayithi zethu azinabuhlobo bokufunda ngokuthi “la maphepha ayingowabafundi. La maphepha ngaweenjini zokukhangela”. Undenze ndakrwempa intloko yam kangangokuba sifike ezantsi kwindlela yokuphucula kangangokuba umntu UKHETHA ukuba amaphepha angafundwa ngabantu. Ibetha ingqondo yam. Lungiselela kangangoko unako ngelixa udala umxholo ofundisayo ubonakala ngathi ngumbono wangaphandle. Akufuneki ukuthetha, ndithumele le post kubantu abambalwa kwinkampani yam.